【 192.168.1.1 】 Router အဒ်မင်ဝင်မည်နှင့်ဝိုင်ဖိုင် Configuration .
ရန် Login လုပ်နည်း 192.168.1.1?: Router ၏ Password ကိုထိုအ Configuration ကို Reset လုပ်ဖို့ကဘယ်လိုတွင်အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်တစ်ဦးကအဆင့်
၏အဒ်မင် Panel ကိုမှ Login လုပ်နည်းအပေါ်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်ဒီအဆင့်မှာ 192.168.1.1, ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များမှာကြည့်ရပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်ဤဖတ်နေနေတယ်ဆိုရင်သင်သည်အဘယ်သို့သိရမည် 192.168.1.1? သို့သျောလညျး, သငျသညျအကွောငျးကိုမသိကြပါလျှင်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမြန်ကြည့်ကြပါစို့.
IP လိပ်စာကဘာလဲ 192.168.1.1?
ဤ IP လိပ်စာအများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်, အများအားဖြင့်, IP address ကို Router ကိုကို log in လုပ်ဖို့လိုအပ်, username နှင့် password လည်း router ကိုမှရဲ့ login ၏ IP address ကိုအတူလိုအပ်သည်. IP လိပ်စာ 192.168.1.1 အဆိုပါ Linksys router ကိုအတွက်အသုံးပြုသည့်ပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်. မတူညီသောပုဂ္ဂလိက IP address ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ကွန်ရက် devices တွေကိုအသုံးပြု.
IP လိပ်စာ 192.168.1.1 အဆိုပါ router များအများစုပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်, အရာသည်အသုံးပြုသူများကသူတို့ Router က၏ကွဲပြားခြားနားသော settings တွေကို configure နိုငျကွောငျးကျင်းပ. တိကျစွာတဦးတည်းလုံခြုံရေး Options ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်, Network မှစီမံခန့်ခွဲမှု, DNS ကို, proxy ကို, အိုင်ပီ QoS, LAN, WAN, DSL, ADSL, မက်, WLAN setting များကို, WPS ပိတ်ပင်တားဆီးမှု; အခြားသူတွေအကြား.
ပုံမှန်အားဖြင့်, Router ကိုအပေါငျးတို့သထုတ်လုပ်သူကြောင်း device ကိုအသီးအသီးစက်ကိရိယာနှင့်အသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်နွယ်နေသောငြိမ်အိုင်ပီလိပ်စာ IP Address ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အခွင့်အာဏာပေးထားမထားပါဘူးစေသည်.
သို့သျောလညျး, တဦးတည်းရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအောက်ပါအားဖြင့်အလွယ်တကူ router ကို၏ username နှင့် password ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်:
login စာမျက်နှာ, IP Address ကိုများအတွက် username နှင့် Password ကို 192.168.1.1
အသုံးပြုသူတစ်ဦးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကနေသူတို့ရဲ့ Router က secure လိုပါက, ထို့နောက်သူတို့၏ default အ username နှင့် password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် 192.168.1.1. မည်သည့် router ကို၏ default အနေနဲ့အသုံးပြုသူနှင့် password for သင်သိသို့မဟုတ်ငါသည် router ၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံရိပ်တွေပေးပြီတူသောရိုးရှင်းစွာဒီလှည့်ကွက်ကိုသုံးပါထို့နောက်မည်သည့်စိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး dont လျှင်.
မည်သူမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်မှသင်၏ router ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်အရှင်က default username နှင့် password တွေနဲ့အလွယ်တကူသင့် router ကို log in နိုင်ပါတယ်, က default အနေနဲ့ username နှင့် password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာ.
ပဌမ, ရဲ့ Login ဖို့ခြေလှမ်းများမှာကြည့်ပါစေ 192.168.1.1.
ဘယ်လို Login ရန် 192.168.1.1 လွယ်ကူသောခြေလှမ်းများနှင့်အတူ IP Address ကို?
ဤတွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးလွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်အတူအိုင်ပီပေါ်တယ်မှဝငျရောကျနိုငျပုံဖြစ်ပါသည်. ဒီနည်းလမ်းကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်, အသုံးပြုသူကို log in နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်အသုံးပြုသူရဲ့ router software ကိုအသုံးပြုသူကိုထောက်ပံ့ပေးသောအပြင်အဆင်များနှင့် configurations configure လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်.
'' IP address ကိုဖွင့်ပါ192.168.1.1'' ကို browser အတွက်. သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ် PC ပေါ်မှာဒီလိုလုပျနိုငျ, ကိုယ့်ကြောင့်သင် login ရည်ရွယ်သည်ဟုအတူတူ router ကိုချိတ်ဆက်ထားကြောင်းကြောင့်သေချာအောင်.
အမှုတစ်ခုအမှားလည်းမရှိ, ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်း 192.168.1.1 Router ကို၏ IP address ကိုမဟုတျပါဘူး. ရိုးရှင်းတဲ့ Google Search အားဖြင့် router ရဲ့ IP address ကိုအကြည့်အရှု, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၏က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်.
သင် router ရဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ရှိသည်ရှိရာရဲ့ login panel ကိုမှ redirected ရလိမ့်မယ်.
အသုံးပြုသူကို router နှင့်အတူကြွလာသောက default username နှင့် password ကိုပြောင်းလဲမမူလျှင်, အသုံးပြုသူနှစ်ဦးစလုံးနယ်ပယ်များတွင် admin ရဲ့ဝင်ရောက်ကြိုးစားနိုင်.
username: admin ရဲ့ နှင့် password: admin ရဲ့.
ထို့နောက် OK ကို '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ’ သို့မဟုတ်ရုံအပြင်အဆင်များ panel ကိုကို log in လုပ်ဖို့ Enter ခေါက်ပါ.
သင် admin ရဲ့ panel ကထဲကို login ပြီးတာနဲ့, သင်သည်မည်သည့်လိုအပ်သောအင်တာနက် setting များကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါလိမ့်မည်.
အခုတော့၏ default အ username နှင့် password ကိုပြောင်းဖို့ခြေလှမ်းများမှာကြည့်ကြပါစို့ 192.168.1.1.
၏က default username နှင့် password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခြေလှမ်းများ 192.168.1.1.
ဖွင့်လှစ် 192.168.1.1 သင့် browser မှာ.
သင့်ရဲ့ default အ Enter အသုံးပြုသူအမည် နှင့် စကားဝှက်ကို.
အဆိုပါဒိုင်ခွက်တွင်, သငျသညျအသုံးပြုသူအမည် Reset "ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် & password option ကို ", ကြောင်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ.
သင့်ရဲ့ default အနေနဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
ကျနော်တို့ရုံရန်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းမှာကြည့်ခဲ့ ၏က default username နှင့် password ကိုပြောင်း 192.168.1.1.
မည်သည့်အခွင့်အလမ်းအားဖြင့် အကယ်. သင်သည်သင်၏ IP လိပ်စာကိုမေ့လျော့, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအလွယ်တကူကြောင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အဆင့်များမှာ.
admin ရဲ့ Panel ကို အသုံးပြု. Router ဝိုင်ဖိုင် Password ကို Reset လုပ်ဖို့ဘယ်လို 192.168.1.1
ကျနော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက် secure နှင့်လည်းလူသိရှင်ကြားမလိုချင်တဲ့ access ကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်ငါတို့ wifi router ကို default အ password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျလျင်မြန်စွာ Router က wifi password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မသိရပါဘူးလျှင် သို့ဖြစ်. စခရင်ပုံအပါအဝင်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအတွက်ပေးထားတဲ့အောက်ကလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာ.
ပထမဦးစွာ ip ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အဒ်မင် Panel ကိုသွားပါ 192.168.1.1
လှမ်း 1 : အဆိုပါကိုသွားပါ “ကြိုးမဲ့” ရဲ့ login admin ရဲ့ panel ကအပြီး.
လှမ်း 2: ပြီးနောက်ကို click “ကြိုးမဲ့” အခုတော့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ကြိုးမဲ့ပြင်ဆင်မှုအား”
သငျသညျp3: သငျသညျ setting ကြိုးမဲ့ကို click လိုက်တဲ့အခါအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းသင်က admin ရဲ့ panel ကမြင်ရပါလိမ့်မည်. အခုဆိုရင်သင့်တွေ့နိုင်ပါသည် လက်ရှိ wifi password ကို.
လှမ်း 4: ယခု စကားဝှက်အသစ် Enter ရာသငျသညျစောငျ့ရှောကျပေမယ့်သတိရနှင့်လုံခြုံမှုရှိတဲ့စကားဝှက်ရိုက်ထည့်သိမ်းထားချင်.
လှမ်း5: အခုတော့ပြီးနောက် သင့်ရဲ့စကားဝှက်အသစ်ရိုက်ထည့်ပါ အထက်ပုံတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း save button ကို click.
အခုတော့သင်သည်သင်၏ router ကို wifi password ကိုအောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပြီ.
အဆိုပါ Router ၏မေ့လျော့ IP Address ကို Recover?
ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်မစုံလဖြစ်ပါတယ်, အသုံးပြုသူအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များမေ့လျော့တဲ့အခါမှာဒါအခြေအနေကိုအဲဒီမှာနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, IP လိပ်စာတစ်ခုချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူးပြောင်းလဲသွားတယ်. ဒီနေရာတွင်အချို့သောနည်းလမ်းများသည်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ရှာတှေ့နိုငျ:
တစ်ဦးက Router Reset လုပ်နည်းတွင်ခြေလှမ်းများ?
အသုံးပြုသူကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ် reset မှာခလုတ် backside Router ကိုနှင့်ရန်ရှိသည် အကြောင်းကိုထိုသို့ကျင်းပရန် 30 စက္ကန့်. ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လူသိများသည် router ပြန်စခြင်းသည်.
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းပြီးနောက်, router သည်မှပြန်လာသောပါလိမ့်မည် စက်ရုံရဲ့ default တန်ဖိုး အားလုံး setting ကိုရှင်းလင်းပါလိမ့်မည်အဖြစ်. Router ကို၏ IP address ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် 192.168.1.1 နောက်တဖန်နှင့်မှတ်ပုံတင် login နဲ့ password ကိုကြောင်းသတင်းအချက်အလက် "နှစ်ဦးစလုံးဖွစျလိမျ့မညျadmin ရဲ့".
အသုံးပြုသူပြန်စခြင်းသည်ပြီးခဲ့သည့် option ကိုကြောင်းသေချာအောင်သင့်တယ်, ဒါကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအပြီးကဲ့သို့သောအခြားအခြေအနေမှာထိုသို့ပြုမှအကြံပြုမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဖန်ဆင်းခဲ့သမျှသောအပြောင်းအလဲစက်ရုံတွင်ပုံသေများကိုပြန်ပါလိမ့်မည်.
တစ်တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေး Router ပြဿနာဖြေရှင်းရန်လုပ်နည်း?
ဒါဟာ router ကိုအသုံးပြုသူ interaction ကမှမတုံ့ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုတစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ. အသုံးပြုသူကို log in ဖို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့အခါ password ကိုလကျမခံပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကွန်ယက်တုံ့ပြန်မှု ping ရဲ့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တောင်းဆိုမှုများကိုမဆိုမျိုးကိုယူမည်မဟုတ်. ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ထိုကဲ့သို့သောမျိုးအတွက်, အသုံးပြုသူကို router troubleshoot ဖို့အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြိုးစားနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကာလ၌ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်.
တစ်တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေး Router ပြဿနာဖြေရှင်းရန်ရန်ခြေလှမ်းများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏:
ပထမဦးစွာ, ကေဘယ်လ်ကြိုး၏ဆက်သွယ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေး (Ethernet ဟာရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်) စနစ်တကျသို့မဟုတ်မအလုပ်လုပ်တယ်. လည်း, Router ကိုပေါ်နဲ့ LED status ကိုတက်ကြွစွာပြသကြောင်းသေချာအောင်. အရေးကြုံလျှင်, လူအပေါင်းတို့သည်ဆက်စပ်အယ်လ်အီးဒီရဲနေကြတယ်, က Router က၏တနျခိုးထောက်ပံ့ရေးနှင့်အတူပြဿနာဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
အခုတော့အသုံးပြုသူကဘာလဲဆိုတာသိတယ် 192.168.1.1 IP လိပ်စာနှင့်မည်သို့ဖို့ router များ၏ admin ရဲ့ panel ကသို့ log မှ ကို default username နှင့် password ကိုပြောင်း. အသုံးပြုသူလည်းယင်း၏ admin ရဲ့ panel ကစူးစမ်းနှင့်၎င်းတို့၏ကွန်ယက်ကိုပိုမိုလုံခြုံနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ကွဲပြားခြားနားသော setting များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
192.168.0.1 အဒ်မင်ဝင်မည် & router Setup ကို ကပြောပါတယ်:
ဧပြီလ 27, 2019 တွင် 9:45 နံနက်
[…] ကဲ့သို့သောအခြားအလိပ်စာများ 192.168.2.1 နှင့် 192.168.1.1 router သည်၏အခြားအမှတ်တံဆိပ်တွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်. လည်း, သာတိကျသော IP လိပ်စာတစ်ခုတည်းကအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် […]